နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်နေ့က ဦးဝီရသူ က အများအမြင်ရှေ့ထွက်ပြီး အဖမ်းခံ
တနှစ်ကျော်ကြာ ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေတဲ့ အမျိုးသားရေး ၀ါဒီ ဦးဝီရသူ ဟာ နိုဝင်ဘာလ (၈) ရက် ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ရက်ပိုင်းအလို မနေ့ တနင်္လာနေ့က အများအမြင်ရှေ့ထွက်ပြီး အဖမ်းခံလိုက်တာဘာကြောင့်လဲ။ ဘယ်လို သက်ရောက်မှုတွေ ဖြစ်လာနိုင်သလဲ။ ကိုဝင်းမင်းက စုစည်းတင်ပြထားပါတယ်။
အခုလို ဦးဝီရသူ တနင်္လာနေ့က ဒဂုံမြို့နယ် ရဲစခန်းကို သွားရောက် အဖမ်းခံချိန်မှာပဲနောက်ထပ် အမျိုးသားရေးဝါဒီ လှုပ်ရှားတက်ကြွသူ ဟိန်းဝေယံလည်း ထိုင်းနယ်စပ် (မြဝတီမြို.) ရဲစခန်းကို သွားရောက်အဖမ်းခံခဲ့ပါတယ်။ ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ NLD ပါတီပြောခွင့်ရ ဒေါက်တာမျိုးညွန့်က အခုလို သုံးသပ်ပါတယ်။
“နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်းတဲ့သဘောရှိတာပေါ့လေ၊ ဟို ဟိန်းဝေယံဆိုတာကလည်း ဒီရက်ထဲမှာပဲ၊ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ကို ပြန်ပြီး အဖမ်းခံကြတယ်လေ။ကျွန်တော်တို့သိတဲ့ အချက်အလက်တွေက၊ အနည်းငယ်ပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒိတော့ ဒီအတွက်တော့ ကျွန်တော်တို့ အထွေအထူး မှတ်ချက်မပေးလိုတော့ပါဘူး။”
ဒါ့အပြင် ၂၀၀၇ ခုနှစ် ရွှေဝါရောင်သံဃာတော်လှုပ်ရှားမူမှာ တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့တဲ့ ဦးသောဘိတ (အင်္လကာကြယ်) ကလည်း၊ အလားတူ အခုအချိန်ကြီး ထူးခြားပုံကို
“ဒီနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကို စောင့်ကြည့်ပြီးတော့၊ ဒီ ဦးဝီရသူက တစ်နေရာမှာ နေခဲ့တာပေါ့။အခု အခင်းအကျင်းကလည်း လက်ရှိအစိုးရအာဏာဆက်ရမဲ့ အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ပေါ့။ဆိုတော့ ဒီအမျိုးသားရေးလောကထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာကျင်လည်လုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့၊ ဒါကာလေး ဟိန်းဝေယံ သူ့ရဲ့ဖော်ထုတ်မူတွေကလည်း အရေးပါမယ်။”
တကယ်တော့ မနှစ် ၂၀၁၉ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းမှာ၊ အစိုးရအပေါ် အကြည်အညိုပျက်စေတဲ့ ပြောဆိုဝေဖန်မူတွေနဲ့၊ နှစ်လယ်ပိုင်းမှာ၊ တရားစွဲ၊ ဝရမ်းထုတ်ခံထားခဲ့ရတဲ့ ဦးဝီရသူအနေနဲ့၊ အခုလို ကိုယ်တိုင်အဖမ်းခံလာခဲ့ရတဲ့ အကြောင်းရင်းနဲ့ သက်ရောက်နိုင်မူကို၊ မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်း နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလေ့လာသုံးသပ်သူ၊ သင့်ဘဝမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာဟောင်း ဒေါက်တာတင်မောင်သန်းကို မေးရာမှာ
“ ဦးဝီရသူက သူ့ရဲ့ပရိသတ်တွေကို လှုပ်လှုပ်ရှားရှားပြန်ဖြစ်စေချင်လားမသိဘူး။အခုကတော့၊ မဲပေးတဲ့အခါမှာ NLD နဲ့ ပြိုင်ဘက် ပါတီအဖွဲ့အစည်းကို မဲပေးဖို့ ရည်ရွယ်တာလည်း ပါနိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုက အဲ့ဒီလို လာပြီးအဖမ်းခံတယ်၊ဒီလိုဝင်သွားရတယ်ဆိုတာကို ပြခြင်းအားဖြင့်၊ ဒီလှုပ်ရှားမူတစ်ခုကိုများ သူ မျှော်လင့်သလားပေါ့။ဒီဟာကြောင့်၊ မဲ့ပေးပုံပေါ်မှာတော့ သက်ရောက်မူ မရှိနိုင်ဘူး။အဓိကရုဏ်းတွေကို ဖန်တီးတဲ့ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖျက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ဟာတွေကတော့ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ လုပ်လာဖို့ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်။”
အဲ့ဒီတော့ အခုလို ဘာသာရေးလှုပ်ရှားမူအထိ ဖြစ်လာဖို့ စိုးရမ်ရတာရှိလားလို့ မေးရာမှာ ဦးသောဘိတက -
“သူတို့ပြောနေကျ အမျိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာဆိုတာက၊ တစ်ဦးတစ်ဖွဲ့ကောင်းစားရေးအတွက် ဝါဒမှိုင်းတိုက်ခံရတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကို၊ လူတွေက သိခဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့။အဲ့ဒါကြောင့်မို့ အဲ့ဒီအပေါ်မှာ ဘာမှဖြစ်စရာအကြောင်းမရှိဘူး။ဒီ လူတွေ အဲ့ဒိကိစ္စထက်၊ ရွေးကောက်ပွဲကိစ္စကိုအာရုံစိုက်ကြပါလို့ပဲ ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။သူတို့ ပြည်ထဲရေးက သူ့အလုပ်သူလုပ်သွားလိမ့်မယ်။”
ဒါပေမဲ့ လက်တွေ့အရ အခုလိုတားဆီး၊ အရေးယူမူတွေလုပ်ဖို့၊ တပ်ကိုပြောရေး၊ အစိုးရမှာ အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်လို့ ဒေါက်တာတင်မောင်သန်းက ထောက်ပြပါတယ်။
“တားဆီးတဲ့အခါမှာလည်း၊ အထူးသဖြင့်တော့ အဲ့ဒီလို လှုပ်ရှားမူတွေကို လုပ်မလားလို့၊ စုံစမ်း ဖော်ထုတ် အရေးယူတာတွေလုပ်ဖို့လည်းလိုတယ်။ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီနေရာမှာ၊ အားနည်းချက်တွေ ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနက လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ၊ အထူးသဖြင့် ရဲပေါ့နော်၊ နောက်ထောက်လှမ်းရေး၊ SB လို စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့ဌာနတွေ ကိုင်ထားရပြီး၊ အဲ့ဒါက စစ်တပ်နဲ့ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်နေတယ်။အဲ့ဒီတော့ ယျေဘူယျအားဖြင့် တပ်မတော်ကလည်း၊ ဒီ အမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လူမျိုးရေးကိစ္စကို၊ လက်ယာအစွန်းဆန်ဆန်၊ တင်ပြီးတော့ ပြောနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်း တပ်မတော်ထဲမှာ ရှိနေတဲ့အခါကျတော့၊ တချို.ကိစ္စတွေ၊ အမူတွေဆို မဖော်ထုတ်နိုင်ဘူး။”
ဒါကြောင့် နိုင်ငံရေးအရ အစိုးရက ဘယ်လိုပြင်ဆင်သင့်တာကို ဒေါက်တာတင်မောင်သန်းကပဲ -
“နိုင်ငံရေးအရ မိမိ သာသနာရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့တာတွေ ပြောပြဖို့လိုမယ်လို့ ထင်တယ်။အထူးသဖြင့်တော့ ဦးဝီရသူရဲ့ လှုပ်ရှားမူကို မတူကြောင်းပြဖို့အတွက်၊ ဘာသာပေါင်းစုံအဖွဲ့ကြီးက ဘာသာရေးကို ခုတုံးမလုပ်ဖို့ ပြောလာကြရင်၊ ဒါပိုပြီးကောင်းမယ်ထင်တယ်။”
အဲ့ဒီတော့ ပြည်သူတွေကရော၊ အခုလိုအရေးကြီးချိန်မှာ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားသင့်ပါလဲလို့ မေးရာမှာ ဒေါက်တာတင်မောင်သန်းက -
“လူထုကိုယ်နှိုက်က အဲ့ဒိလုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတိ၊ အသိ ကောင်းကောင်း မြင့်မြင့်မားမားရှိပြီးတော့၊ အထူးသဖြင့် အခုလို လူမူမီဒီယာအခြေအနေမှာ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်တားဆီးနိုင်မလဲဆိုတာကို၊ ဖန်တီးတာလုပ်ဖို့လိုမယ်လို့ထင်တယ်။ အထူးသဖြင့် အထူး အခုလို ရွေးကောက်ပွဲကာလမှာ၊ မန္တလေးမှာအရင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြတဲ့၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏ်းဖြစ်ဖို့လှုံဆော်ချက်တွေကို ကာကွယ်တားဆီးတဲ့အဖွဲ့တွေကို၊ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖွဲ့ပြီးတော့ လှုပ်ရှားခဲ့ကြတဲ့ အတွေ့အကြုံတွေရှိတယ်။သံဃာတော်တွေ ကိုယ်နှိုက်ကိုက၊ သတင်းကို စပြီးတော့ Alert လုပ်တဲ့ဟာ၊ တုံးခေါက်တယ်ပေ့ါဗျာ။ဒီ မီးကိုမမြင်ရသေးဘူး၊ မီးခိုးကိုတွေ့တာနဲ့ကို၊ တုံးခေါက်ကြဖို့ သံဃာတော်တွေကလည်း လိုပါတယ်။”
တကယ်တော့ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးမှာ အရေးပါတဲ့ ဒုတိယအကြိမ် ရွေးကောက်ပွဲမှာ ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမူကထွက်ပေါ်လာတဲ့ လက်ရှိအစိုးရပါတီနဲ့ အရင် တပ်မတော် အုပ်ချုပ်မှုကလာခဲ့တဲ့ အရပ်သားတပိုင်း အစိုးရပါတီအကြား အနိုင်အရှုံးပြိုင်ဆိုင်မူ ပြင်းထန်လာချိန်မှာ အခုလို အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေဘက် အများပြည်သူရှေ့ ထွက်ပြီး အဖမ်းခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝီရသူ ဘာကွောငျ့ အဖမျးခံသလဲ
တနှဈကြျောကွာ ထှကျပွေးတိမျးရှောငျနတေဲ့ အမြိုးသားရေး ဝါဒီ ဦးဝီရသူ ဟာ နိုဝငျဘာလ (၈) ရကျ ရှေးကောကျပှဲမတိုငျခငျ ရကျပိုငျးအလို မနေ့ တနင်ျလာနကေ့ အမြားအမွငျရှထှေ့ကျပွီး အဖမျးခံလိုကျတာဘာကွောငျ့လဲ။ ဘယျလို သကျရောကျမှုတှေ ဖွဈလာနိုငျသလဲ။ ကိုဝငျးမငျးက စုစညျးတငျပွထားပါတယျ။
အခုလို ဦးဝီရသူ တနင်ျလာနကေ့ ဒဂုံမွို့နယျ ရဲစခနျးကို သှားရောကျ အဖမျးခံခြိနျမှာပဲနောကျထပျ အမြိုးသားရေးဝါဒီ လှုပျရှားတကျကွှသူ ဟိနျးဝယေံလညျး ထိုငျးနယျစပျ (မွဝတီမွို.) ရဲစခနျးကို သှားရောကျအဖမျးခံခဲ့ပါတယျ။ ဒီအခွအေနတှေနေဲ့ ပတျသကျလို့ NLD ပါတီပွောခှငျ့ရ ဒေါကျတာမြိုးညှနျ့က အခုလို သုံးသပျပါတယျ။
“နညျးနညျးတော့ ထူးဆနျးတဲ့သဘောရှိတာပေါ့လေ၊ ဟို ဟိနျးဝယေံဆိုတာကလညျး ဒီရကျထဲမှာပဲ၊ တိုကျတိုကျဆိုငျဆိုငျကို ပွနျပွီး အဖမျးခံကွတယျလေ။ကြှနျတျောတို့သိတဲ့ အခကျြအလကျတှကေ၊ အနညျးငယျပဲရှိပါတယျ။အဲ့ဒိတော့ ဒီအတှကျတော့ ကြှနျတျောတို့ အထှအေထူး မှတျခကျြမပေးလိုတော့ပါဘူး။”
ဒါ့အပွငျ ၂၀၀၇ ခုနှဈ ရှဝေါရောငျသံဃာတျောလှုပျရှားမူမှာ တကျကွှစှာပါဝငျခဲ့တဲ့ ဦးသောဘိတ (အင်ျလကာကွယျ) ကလညျး၊ အလားတူ အခုအခြိနျကွီး ထူးခွားပုံကို
“ဒီနိုငျငံရေးအခငျးအကငျြးကို စောငျ့ကွညျ့ပွီးတော့၊ ဒီ ဦးဝီရသူက တဈနရောမှာ နခေဲ့တာပေါ့။အခု အခငျးအကငျြးကလညျး လကျရှိအစိုးရအာဏာဆကျရမဲ့ အခွအေနဖွေဈနတေယျပေါ့။ဆိုတော့ ဒီအမြိုးသားရေးလောကထဲမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာကငျြလညျလုပျဆောငျခဲ့တဲ့၊ ဒါကာလေး ဟိနျးဝယေံ သူ့ရဲ့ဖျောထုတျမူတှကေလညျး အရေးပါမယျ။”
တကယျတော့ မနှဈ ၂၀၁၉ ခုနှဈ နှဈဆနျးပိုငျးမှာ၊ အစိုးရအပျေါ အကွညျအညိုပကျြစတေဲ့ ပွောဆိုဝဖေနျမူတှနေဲ့၊ နှဈလယျပိုငျးမှာ၊ တရားစှဲ၊ ဝရမျးထုတျခံထားခဲ့ရတဲ့ ဦးဝီရသူအနနေဲ့၊ အခုလို ကိုယျတိုငျအဖမျးခံလာခဲ့ရတဲ့ အကွောငျးရငျးနဲ့ သကျရောကျနိုငျမူကို၊ မွနျမာနိုငျငံအကွောငျး နကျနကျရှိုငျးရှိုငျးလလေ့ာသုံးသပျသူ၊ သငျ့ဘဝမဂ်ဂဇငျး အယျဒီတာဟောငျး ဒေါကျတာတငျမောငျသနျးကို မေးရာမှာ
“ ဦးဝီရသူက သူ့ရဲ့ပရိသတျတှကေို လှုပျလှုပျရှားရှားပွနျဖွဈစခေငျြလားမသိဘူး။အခုကတော့၊ မဲပေးတဲ့အခါမှာ NLD နဲ့ ပွိုငျဘကျ ပါတီအဖှဲ့အစညျးကို မဲပေးဖို့ ရညျရှယျတာလညျး ပါနိုငျတယျ။နောကျတဈခုက အဲ့ဒီလို လာပွီးအဖမျးခံတယျ၊ဒီလိုဝငျသှားရတယျဆိုတာကို ပွခွငျးအားဖွငျ့၊ ဒီလှုပျရှားမူတဈခုကိုမြား သူ မြှျောလငျ့သလားပေါ့။ဒီဟာကွောငျ့၊ မဲ့ပေးပုံပျေါမှာတော့ သကျရောကျမူ မရှိနိုငျဘူး။အဓိကရုဏျးတှကေို ဖနျတီးတဲ့ ရှေးကောကျပှဲကို ဖကျြဖို့ကွိုးစားတဲ့ဟာတှကေတော့ နညျးအမြိုးမြိုးနဲ့ လုပျလာဖို့ ရှိကောငျးရှိနိုငျတယျလို့ ကြှနျတျောထငျတယျ။”
အဲ့ဒီတော့ အခုလို ဘာသာရေးလှုပျရှားမူအထိ ဖွဈလာဖို့ စိုးရမျရတာရှိလားလို့ မေးရာမှာ ဦးသောဘိတက -
“သူတို့ပွောနကြေ အမြိုး၊ဘာသာ၊ သာသနာဆိုတာက၊ တဈဦးတဈဖှဲ့ကောငျးစားရေးအတှကျ ဝါဒမှိုငျးတိုကျခံရတာဖွဈတယျဆိုတာကို၊ လူတှကေ သိခဲ့ပွီးသှားပွီပေါ့။အဲ့ဒါကွောငျ့မို့ အဲ့ဒီအပျေါမှာ ဘာမှဖွဈစရာအကွောငျးမရှိဘူး။ဒီ လူတှေ အဲ့ဒိကိစ်စထကျ၊ ရှေးကောကျပှဲကိစ်စကိုအာရုံစိုကျကွပါလို့ပဲ ပွောခငျြတယျပေါ့နျော။သူတို့ ပွညျထဲရေးက သူ့အလုပျသူလုပျသှားလိမျ့မယျ။”
ဒါပမေဲ့ လကျတှအေ့ရ အခုလိုတားဆီး၊ အရေးယူမူတှလေုပျဖို့၊ တပျကိုပွောရေး၊ အစိုးရမှာ အခကျအခဲရှိနိုငျတယျလို့ ဒေါကျတာတငျမောငျသနျးက ထောကျပွပါတယျ။
“တားဆီးတဲ့အခါမှာလညျး၊ အထူးသဖွငျ့တော့ အဲ့ဒီလို လှုပျရှားမူတှကေို လုပျမလားလို့၊ စုံစမျး ဖျောထုတျ အရေးယူတာတှလေုပျဖို့လညျးလိုတယျ။ဒါပမေဲ့ အဲ့ဒီနရောမှာ၊ အားနညျးခကျြတှေ ရှိကောငျးရှိနိုငျတယျ။ဘာကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပွညျထဲရေးဝနျကွီးဌာနက လကျနကျကိုငျတပျဖှဲ့တှေ၊ အထူးသဖွငျ့ ရဲပေါ့နျော၊ နောကျထောကျလှမျးရေး၊ SB လို စုံစမျးထောကျလှမျးတဲ့ဌာနတှေ ကိုငျထားရပွီး၊ အဲ့ဒါက စဈတပျနဲ့ တိုကျရိုကျပတျသကျနတေယျ။အဲ့ဒီတော့ ယဘြေူယအြားဖွငျ့ တပျမတျောကလညျး၊ ဒီ အမြိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လူမြိုးရေးကိစ်စကို၊ လကျယာအစှနျးဆနျဆနျ၊ တငျပွီးတော့ ပွောနတေဲ့ ပုဂ်ဂိုလျတှလေညျး တပျမတျောထဲမှာ ရှိနတေဲ့အခါကတြော့၊ တခြို.ကိစ်စတှေ၊ အမူတှဆေို မဖျောထုတျနိုငျဘူး။”
ဒါကွောငျ့ နိုငျငံရေးအရ အစိုးရက ဘယျလိုပွငျဆငျသငျ့တာကို ဒေါကျတာတငျမောငျသနျးကပဲ -
“နိုငျငံရေးအရ မိမိ သာသနာရေး ဆောငျရှကျခဲ့တာတှေ ပွောပွဖို့လိုမယျလို့ ထငျတယျ။အထူးသဖွငျ့တော့ ဦးဝီရသူရဲ့ လှုပျရှားမူကို မတူကွောငျးပွဖို့အတှကျ၊ ဘာသာပေါငျးစုံအဖှဲ့ကွီးက ဘာသာရေးကို ခုတုံးမလုပျဖို့ ပွောလာကွရငျ၊ ဒါပိုပွီးကောငျးမယျထငျတယျ။”
အဲ့ဒီတော့ ပွညျသူတှကေရော၊ အခုလိုအရေးကွီးခြိနျမှာ ဘယျလိုပွငျဆငျထားသငျ့ပါလဲလို့ မေးရာမှာ ဒေါကျတာတငျမောငျသနျးက -
“လူထုကိုယျနှိုကျက အဲ့ဒိလုံခွုံရေးဆိုငျရာ သတိ၊ အသိ ကောငျးကောငျး မွငျ့မွငျ့မားမားရှိပွီးတော့၊ အထူးသဖွငျ့ အခုလို လူမူမီဒီယာအခွအေနမှော၊ ဘယျလိုကာကှယျတားဆီးနိုငျမလဲဆိုတာကို၊ ဖနျတီးတာလုပျဖို့လိုမယျလို့ထငျတယျ။ အထူးသဖွငျ့ အထူး အခုလို ရှေးကောကျပှဲကာလမှာ၊ မန်တလေးမှာအရငျဖှဲ့စညျးခဲ့ကွတဲ့၊ ဘာသာရေးအဓိကရုဏျးဖွဈဖို့လှုံဆျောခကျြတှကေို ကာကှယျတားဆီးတဲ့အဖှဲ့တှကေို၊ ကောငျးကောငျးမှနျမှနျဖှဲ့ပွီးတော့ လှုပျရှားခဲ့ကွတဲ့ အတှအေ့ကွုံတှရှေိတယျ။သံဃာတျောတှေ ကိုယျနှိုကျကိုက၊ သတငျးကို စပွီးတော့ Alert လုပျတဲ့ဟာ၊ တုံးခေါကျတယျပေ့ါဗြာ။ဒီ မီးကိုမမွငျရသေးဘူး၊ မီးခိုးကိုတှတေ့ာနဲ့ကို၊ တုံးခေါကျကွဖို့ သံဃာတျောတှကေလညျး လိုပါတယျ။”
တကယျတော့ ဒီမိုကရစေီအသှငျကူးပွောငျးရေးမှာ အရေးပါတဲ့ ဒုတိယအကွိမျ ရှေးကောကျပှဲမှာ ဒီမိုကရစေီလှုပျရှားမူကထှကျပျေါလာတဲ့ လကျရှိအစိုးရပါတီနဲ့ အရငျ တပျမတျော အုပျခြုပျမှုကလာခဲ့တဲ့ အရပျသားတပိုငျး အစိုးရပါတီအကွား အနိုငျအရှုံးပွိုငျဆိုငျမူ ပွငျးထနျလာခြိနျမှာ အခုလို အမြိုးသားရေးဝါဒီတှဘေကျ အမြားပွညျသူရှေ့ ထှကျပွီး အဖမျးခံခဲ့တာဖွဈပါတယျ။
ဖမ်းမိမူးယစ်များ ဝဒေသတောင်ပိုင်းကလာဟု ထိုင်းနယ်ခြားစောင့်တပ်စွပ်စွဲ